Gịnị mere i kwesịrị DVD Creator Freeware
Kasị ọdịnaya bụ dijitalụ ugbu a. Site ọhụrụ gị ezinụlọ vidiyo na gị igwefoto, gị akụ okwu, ihe nkiri ị download ogologo gị PC, anyị adịkarịghị mkpa a tangible oyiri nke ihe ọ bụla ọzọ. Ma, ihe na-eme mgbe ị chọrọ ikere òkè a oyiri nke ezinụlọ photos na gị akp ezinụlọ? Ị nwere ike ọ bụghị naanị na-enye ha na kọmputa gị. Gịnị na-eme mgbe ị na-achọ na-ekiri a nkiri na ụlọ dị iche na-enweghị a PC? Gịnị na-eme mgbe ị na-achọ ime ka a azụ-elu nke mwute akwụkwọ na ihe omume nke a na kọmputa malfunction?
I kwesịrị ime ka a nke mbipụta. Nke ahụ bụ nanị ụzọ iji hụ na ị ga-enwe a azụ-elu bụrụ na ihe na-aga-ezighị ezi. Chọpụta, i nwere ike iji ígwé ojii - ma bụ na n'ezie na gị akara? A DVD dị mfe azụ ruo otu ugboro ị maara otú, ọ na-ewe obere na-enweghị ohere, na ọ bụ dị ka ihe ọma a azụ-elu-ajụ ka ị nwere ike inwe, ọ bụrụhaala na unu na-echekwa na-eji ya akpọrọ ihe.
Otú ọ dị, ọ bụghị ihe dị dị mfe dị ka ịzụ a ide DVD na n'ịnọgide ya na gị PC si CD mbanye. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nweta ezi ihe, mgbe ahụ, ị ​​chọrọ iji nweta a software na ga-tọghata faịlụ na ide ha gị DVD, nke mere na ị maara na ihe ọmụma, ọ ga-abụ a fim ma ọ bụ akwụkwọ ma ọ bụ foto, na-echekwara na inweta. Luckily, ị na-adịghị akwụ ụgwọ nke a software - e nwere bụ ọtụtụ DVD Onye Okike freeware omume dị. Isiokwu a ga-enye gị ndepụta nke top iri DVD Creator Freeware omume.
Nkebi nke 1: anyị n'elu Iri họpụta mmadụ N'ihi DVD Creator Freeware
Part 2: More Option nke onye Advanced & Professional DVD Creator Freeware
Tupu anyị amalite, anyị ga-agwa gị a dị nta banyere ndepụta. Anyị maara na Windows dabeere usoro akaụntụ n'ihi na ọtụtụ ndị na desktọọpụ / laptọọpụ kọmputa, ma maara na Apple ngwaahịa, gụnyere Apple Mac usoro, bụ mgbe-esiwanye-ewu ewu. Ya mere, anyị na-na na kere a mara mma ọbụna kewaa on software maka Mac na Windows. Ise nke ndị a software bụ Apple dabeere, ise na-Windows dabeere. Otu arụ ọrụ na ma, ubé Inye ego mmiri oyi ya na Microsoft ihu ọma, ma e nwere ihe onye ọ bụla.
Enweghị n'ihu ado, ka-esi na anyị na ndepụta.
1. iSkysoft DVD Creator (n'ihi na Mac / Windows)
Nke a bụ oké niile-nzube DVD burner nke ga-ekwe ka i mee ihe fọrọ nke nta ọ bụla ị chọrọ, na-enweghị na-eri. Ị nwere ike iji ya wuru na-nchịkọta akụkọ ịhụ ihe ị na-eme tupu ị na-eme na-adịgide adịgide apa ọkụ ka CD.
Mụta ihe banyere iSkysoft DVD Creator >>
2. DVDStyler (n'ihi na Mac OS)
Nke a bụ oké software n'ihi na ọ enye gị ohere ike menus tupu na-ere ọkụ gị DVD, na n'adịghị a ọtụtụ ndị ọzọ na software, na-enye ndebiri nke mere na ị nwere ike ịmepụta ọkachamara na-achọ ọdịnaya menus.
Mụta ihe banyere DVDStyler >>
3. Disko (N'ihi na Mac OS X 10.4.3+)
Disko bụ oké software maka OS X nke na-enyere na-ere ọkụ DVD. Ọ na-nwere ọtụtụ ihe atụmatụ, dị ka animations na ihe dị mfe ịghọta ọrụ interface na pụtara na ị ga-ama ka esi eji ya na mgbe na-enwe ụjọ.
Mụta ihe banyere Disko >>
4. LiquidCD (n'ihi na Mac OS X)
LiquidCD bụ a n'ezie mfe ma kensinammuo mpempe stoftware na nke ahụ bụ maka Mac OSX usoro. N'etiti ya oké ihe bụ dịgasị iche iche nke faịlụ formats na ọ pụrụ ịnagide na-enwu. Otú ọ dị, ọ bụ a adọkpụ software - na anyị na-atụ na mmepe lebara nke a iji na-omume na-esonụ larịị.
5. BurnX (n'ihi na Mac OS X)
Nke a software bụ ihe pụrụ iche n'etiti freeware DVD Onye Okike software maka Mac n'ihi na ọ nwere ikike ọkụ a CD ma ọ bụ DVD na otutu sessions. Ihe nke a pụtara bụ na nnoo - kama nke na-eke a na-adịgide adịgide faịlụ nchekwa jidesie a DVD, BurnX-enye gị ohere ihichapu na-eji dochie faịlụ gị DVD. Nke a dị mma maka archiving na ndabere nzube, nakwa dị ka mgbe gị mkpa maka nchekwa mgbanwe.
6. DeVeDe (n'ihi na Windows)
DeVeDe bụ nke mbụ Windows dabeere software anyị na depụtara. Ọ bụ na-a mara mma nifty obere software na nwere ike ime ọtụtụ ihe na a mfe freeware maka DVD e kere eke ga-enwe ike ime.
Ụfọdụ ala ihe banyere nke a software ezie: Firstly, ọ dị oké maka ọgwụgwụ = ọrụ na gị nkezi kọmputa onye ọrụ, Otú ọ dị ya na-agaghị enyere gị aka na-enye ihe ọ bụla ụdị ọrụ ozi na gị DVD si. Ọzọkwa, ọ bụ nanị dakọtara na mgbe e mesịrị nsụgharị nke Windows. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere okenye sistemụ, ị pụrụ iji ego maka ndakọrịta n'ihu gị ibudata a freeware.
Mụta ihe banyere DeVeDe >>
7. VobBlanker (n'ihi na Windows XP, Vista, 7, 8)
VobBlanker bụ a bit ọzọ ụfọdụ na ya ime ka ụfọdụ nke ọzọ DVD Onye Okike softwareon ndepụta a. Ọ na-eji kpọmkwem na-arụ ọrụ na VOB faịlụ, na-eji ukwuu n'ime aka iyipụ ngafe ọmụma na-ama na-itinye na koodu n'ime video faịlụ. N'ihi na, ọ bụ nnọọ uru. Otú ọ dị, ọ bụghị n'ozuzu ojiji enyi na enyi na otu ụzọ nke na ụfọdụ ndị nhọrọ anyị na-na depụtara n'ebe ndị ọzọ.
Mụta ihe banyere VobBlanker >>
8. Avi2DVD (n'ihi na Windows XP, Vista, 7, 8)
Avi2DVD bụ a software dị maka windows ígwè nke na-erite uru dị ukwuu site eziokwu na ọ nwere ihe incredibly mfe ọrụ interface. Nke a na-eme ka ọ ukwuu dị ka a DVD Onye Okike freeware usoro ihe omume ndị na-enwechaghị ahụmahụ. Otú ọ dị, ngbanwe bụ obere n'ụzọ kwụ ọtọ, na e nweghị ezigbo kwụsie ike - mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ, mgbe ụfọdụ, ị ga-nsogbu oge ịse.
Mụta ihe banyere Avi2DVD >>
9. CDBurnerXP (n'ihi na Windows XP, Vista, 7, 8)
CDBurner XP bụ oké DVD Onye Okike freeware - na ọ bụ karịsịa mma ma ọ bụrụ na ị chọrọ ike audio CD. Ọ na-ekwe e kere eke nke ọdịyo disks-enweghị na-eme ihe otú ọtụtụ burners eme - ahapụ nnukwu gaps n'etiti tracks.
Na okwu nke ọzọ dị ike arụmọrụ, ọ pụkwara aka na-ere ọkụ DVD si nke ike-eji buut si - nke bụ magburu onwe ya n'ihi akwado gị sistemụ.
Otú ọ dị, otu na-ezighị ezi bụ na CDBurnerXP nwere nnọọ mgbagwoju anya onye ọrụ interface mgbe tụnyere ndị ọzọ software na ndepụta a.
Mụta ihe banyere CDBurnerXP >>
10. DVD kpatụ aka gaa na (n'ihi na Windows XP, Vista, 7, 8)
DVD kpatụ aka gaa dị ukwuu n'ihi na o nwere ọtụtụ atụmatụ na ndị ọzọ DVD creators na-enweghị. N'etiti ya kacha mma atụmatụ ndị ya ike na iji tọghata na ide 45 dị iche iche nke faịlụ gị disk. Ọzọkwa, ị pụrụ, kwesịrị na ị chọrọ ike video faịlụ, ike ndepụta okwu, ọdịyo egwu (n'elu nke video) na a menu iji ike a ọkachamara-ịke DVD nke ahụ bụ mfe iji na jupụtara atụmatụ.
Wondershare DVD Creator Bụ ihe dị mfe na-eji DVD eke software nke na-adịghị achọ ihe ọ bụla ọkachamara ikweta. Na ukwuu wuru na-ndebiri maka gị DVD NchNhr, i nwere ike ike a pụtara DVD karịa mgbe.
Nkwado na-ere ọkụ vidiyo na ọ fọrọ nke nta ọ bụla na-ewu ewu video formats.
Ọkụ videos ka a ọkachamara DVD na 40 + professionally e menu ndebiri.
The kere DVD nwere ike na-akọrọ ndị enyi na ezinụlọ.
> Resource> DVD> Top 10 kasị mma DVD Creator Freeware